Tyfọdụ typosquatters nwere ike iji ohere dee ihe mgbe ịdebanye URL ahụ "Apple.com" | Esi m mac
Tyfọdụ typosquatters nwere ike iji uru mperi ndenye ihe ederede mgbe ha na-ede URL ahụ "Apple.com"
Nke mbụ, ọ dị mkpa ịkọwapụta ihe ụdị squatting bụ maka ndị na-amabeghị okwu ahụ, ọ bụ ụdị egwu nwere ike tinye data anyi na oke ihe egwuYabụ, si a ọdịda mgbe dee a akwụkwọ ozi na adreesị URL na kiiboodu, anyị nwere ike iru a obi ọjọọ website n’amaghị ama.
Ọ bụ ya mere ụdị cyberattack a makwaara dị ka URL HIJACKING (url hijacking). Ndi jiri ya ji ya debanye aha ewepụtara site na aha ụfọdụ nke ebe nrụọrụ weebụ a ma ama na ịntanetị, na nke a Apple.com, mana o doro anya na ya na njehie ederede dị ka "Apple.om", ya mere ha na-eche maka ndị ọrụ nke Mac ma ọ bụ Windows kọmputa ndị "jidere" ndị ọrụ na-enweghị isi.
Dabere na ndị nyocha nchekwa na EndGame, ngalaba kachasị elu maka mba Oran Middle East. a na-erigbu ndị typosquatters Ha edebanyela aha ihe karịrị 300 ngalaba aha na suffix .om maka ụlọ ọrụ na ọrụ US dịka Citibank, Dell, na Macys ma ọ bụ Gmail.
Ndị ọrụ Mac OS X nọ na Chakwasa ihie na mkpọsa a nke malware. Dabere na EndGame, mgbe onye ọrụ Mac sụrụ ngọngọ na otu n'ime ibe weebụ ndị a na .om suffix, ndị na-ede akwụkwọ na-eji Flash Flash adịgboroja nke na-egosi dị ka mmapụta wee gbalịa ịghọgbu ndị ọrụ ịwụnye akụrụngwa mgbasa ozi a na-akpọ Genieo na nke Kedu anyị ekwuolarị na nke ọzọ a.
Genieo bụ ụdị nke malware / adware dị iche iche na-abanyekarị sistemụ onye ọrụ na-egosi dị ka mmelite Flash. N'otu oge na iche na kọmputa, Genieo locates onwe ya a .DMG oyiyi na mgbe e mesịrị na-erigbu a usoro vulnerability na-akpaghị aka wụnye onwe ya dị ka ndọtị niile na-akwado ihe nchọgharị (Chrome, Firefox ma ọ bụ Safari). Ya mere, ị maara, site ugbu a gaa n'ihu ị ga-akpachara anya mgbe ị na-ede adreesị ziri ezi na ịlele akwụkwọ nche iji mara na anyị nọ na saịtị a tụkwasịrị obi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Tyfọdụ typosquatters nwere ike iji uru mperi ndenye ihe ederede mgbe ha na-ede URL ahụ "Apple.com"
Nweta ngwa 11 na ọnụahịa mara mma na All-Star Mac Bundle 2016
Enwere ike ịre Apple Car na $ 75.000